ICT.com.mm မှာ Helio G35 Gaming Processor Chipset နဲ့ Realme C15 တွေကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပြီနော် ~ The ICT.com.mm Blog
ICT.com.mm မှာ Helio G35 Gaming Processor Chipset နဲ့ Realme C15 တွေကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပြီနော်
အရောင်ဆန်းဆန်းနဲ့ ပြူးပြူးပြဲပြဲကြီးတွေ မကြိုက်ဘူး၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ လူကြီးဆန်တဲ့ အရောင်ကို ရှာနေရင်တော့ ICT.com.mm မှာ Helio G35 Gaming Processor Chipset နဲ့ Realme C15 တွေကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပြီနော်…
Realme C15 မှာ 6000mAh high-capacity battery ပါလို့ ultra-long battery life ဖြစ်တဲ့အတွက် heavy ဂိမ်းတွေ ဆော့ရင်တောင် power bank မလိုဘဲ အားကြာရှည်ခံနေမှာပါ။ 18W Quick Charge ကိုမှ 9V/2A adapter ပါတာဆိုတော့ charging time ကြာမှာ စိတ်ပူစရာလုံးဝမလိုဘူးနော်…
ပေါ့ပါးတဲ့ ဒီဇိုင်းကိုမှ၊ 6.5″ Mini-Drop Fullscreen Display နဲ့ Ultra-wide Quad Camera ပါတာဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်မလား? ဂိမ်းဆော့မလား? အလန်းစားပုံရိပ်တွေနဲ့ ဓာတ်ဖမ်းမလား? လေဒီကြိုက်တာရွေးလို့ရပြီပေါ့…
super nightscape mode ပါလို့ ညဘက်တွေ အပြင်မှာ snap ဖမ်းပြီးရိုက်ရင်တောင် ကြည်လင်ပြီးတောင်ပတဲ့ပုံရိပ်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ့် ဖုန်းတစ်လုံးဆိုရင် မမှားဘူးနော်။ နောက်ပြီး RAM4GB/64 GBလဲ ပါတဲ့အပြင် လိုသလို storage ထပ်စိုက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ဦးမှာပါ။
ဒါ့ကြောင့် တည်ငြိမ်ပြီးလူကြီးဆန်တဲ့ အမိုက်စားအရောင်တွေနဲ့ ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ Realme C15 ကို K219,900 တည်းနဲ့ ဒီအောက်က လင့်ခ်ထဲမှာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီနော်…
Blue Color Shop here: https://www.ict.com.mm/product/realme-c15-blue-4gb-64g
Silver Color Shop here: https://www.ict.com.mm/product/realme-c15-blue-4gb-64g
Newer ICT.com.mm မှာ Extra Old သက်တမ်းရှိတဲ့ Delamain Cognac Grande Extra Spirits Champagne ကိုရောင်းပေးချင်ပါတယ်
Older ICT.com.mm မှာ EZVIZ C6N Smart Wi-Fi Pan & Tilt Camera ရှိတယ်နော်